Zimbabwe -- Radio France Internationale, Paris - allAfrica.com
What finally led to the fall of Robert Mugabe on 21 November? The liberation leader turned authoritarian president was toppled by his erstwhile allies, the war veterans. So what… Read more »
Zimbabwe's next President Emmerson Mnangagwa has vowed to lead the country out of economic ruin, ahead of his inauguration Friday. The former Vice president returned to Harare… Read more »
Zimbabwe's President Robert Mugabe has claimed he was never asked to be a goodwill ambassador for the World Health Organisation. This comes after international criticism forced the… Read more »
Zimbabwe: Ervine Leads Surge to Victory Over Sri Lanka
Craig Ervine smashed eight fours and a six during a game changing 69 on Saturday to help Zimbabwe to a four wicket victory over Sri Lanka in the fourth one day international. Read more »
Africa: Warriors Prepare for Battle Against Algeria
Zimbabwe are considered the makeweights of a pool containing Algeria, Senegal and Tunisia. On paper Algeria's opening Group B match against Zimbabwe in Franceville should be three… Read more »
Zimbabwe: AFCON Squad Fights for Better Deals On Eve of Tournament
Zimbabwe's national football team left Harare for the Africa Cup of Nations on Sunday following a row with Zimbabwe Football Association officials over allowances and bonuses. Read more »
Zimbabwe: Maxwell Shumba Makes His Zimfirst Party All-Inclusive
In an effort to stand out from the new political parties on the scene, Maxwell Shumba, the founder of ZimFirst party, says he is appealing to all Zimbabweans, but has made a point… Read more »
Zimbabwe: How Is Zimbabwe Paying for Its New Bond Notes?
Questions are being raised about the collateral behind the Zimbabwean government's issue of new US dollar denominated bond notes, an initiative which was announced by the Reserve… Read more »
Zimbabwe: Mnangagwa Poised for Victory - Chiwenga